ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း ဒုတိယ သမ္မတ ဖြစ်ပြီ လစ်လပ်နေတဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ (၁) အဖြစ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်းကို ဒီကနေ့ ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့က ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်းဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ဒုတိယ သမ္မတ (၁) အဖြစ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနေစဉ်။ RFA
အခုလို ဒု သမ္မတ ရာထူးအတွက် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော် အသိုင်းအဝန်းက ကြားရတဲ့သတင်းကို RFA က ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်က ဒီကနေ့ကျမှ တရားဝင်ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Congratulations, General Nyan Tun! I want to humbly request you about illegal migrants Bengali Rohingyas. This time is critical time for Myanmar.
1. Rohingya's real natives are from Bangladesh, not from Burma.
2. Rohingya killed, raped, insulted to Burmese/Rakhine people several times lawlessly.
3. Rohingya don't have visa, no birth certificate, no evidence document at Rakhine Sate and Myanmar.
4. All Bengali Rohingya move to other country by UNHCR Program.
5. Almost Bengali Rohingya are criminal persons and illegal visitors (visa overstay persons or illegal migrants are not allow to stay by any government authorities) so please deport Rohingya soon!!!! We needabrave and sharp leader like General Aung San in Burma. Please GET UP Myanmar scholars, NLD Leaders and Myanmar parliament leaders among them. We thank you RFA!
Aug 16, 2012 05:01 AM